Bathi umphefumulo womunye umuntu ubumnyama. Lokhu kunjalo ngempela. Isibonelo esihle abamele isigamu esihle somuntu. Bachitha isikhathi esiningi phambi kwesibuko ukuze bathole iphutha elilandelayo ekubukeni kwabo. I-Strange, yebo, kodwa kuyiqiniso. Ngesikhathi esifanayo, abesifazane bahlale bebuka imfashini, bezama ukuyifanisa. Kuze kube manje, mhlawumbe, wonke umuntu uyazi ukuthi anganciphisa isisindo, kodwa kanjani angenza imbongolo ingenze ibe yinto enhle kangaka? Yile ndaba eye yaba isihloko esiyinhloko salesi sihloko, i-tk. Ukhathazeka ngempela abesifazane abaningi.
Okokuqala, kufanele kuqashelwe ukuthi ayikho indlela esheshayo futhi ephumelelayo yokwenza imbongolo ingaphezu kokuhlinzwa kwepulasitiki. Kodwa-ke, akuzona zonke izintombi ezizovumelana nokusebenza ukuze uthole amafomu afanele, futhi kubiza kakhulu. Ngakho-ke, siphakamisa enye inketho - umsebenzi omude nobunzima kuwe.
I-butt yethu inemisipha emihle, engakhula , njengabanye abanye, ngosizo lokuqeqesha nokuzikhandla ngokomzimba. Ukuvakashela i-gym njalo (3-4 izikhathi ngesonto), ngosizo lokuzivocavoca okukhethekile, noma yiliphi owesifazane ongakwazi ukugeqa izinkalo zakhe nezintambo, okuzokwenza lokhu kuyingxenye yomzimba ube nesimo esizungezile, ukuqina nokubonakala okukhangayo. Ukuze uthole imiphumela engcono futhi esheshayo ngaphambi kokuqeqeshwa (kungakapheli ihora elilodwa) futhi emva kokunconywa ukuba udle amaprotheni ukudla.
Ngakho-ke, yiziphi izinhlobo zokuzivocavoca ezihloswe ukukhulisa abapristi? Okokuqala, okuyinhloko futhi ephumelela kakhulu kuwo - izikwele. Lokhu kuzoqinisekiswa nanoma yimuphi umqeqeshi wempilo. Isikhundla sokuqala - imilenze, ihlukaniswe ububanzi bamahlombe, nezandla ebhande (ukuze uthole umphumela omkhulu, ungathatha umthwalo esandleni). Kulesi simo, kubalulekile ukugcoba kancane kancane, ngokuphansi ngangokunokwenzeka, ukuze i-butt iqhube kancane emuva. Esikhundleni esiphansi, udinga ukuhlala kancane (ngokoqobo imizuzwana embalwa). Izikwele kufanele zenziwe ngezindlela ezimbili noma ezintathu (izikhathi ezingu-17 ngasinye).
Ukubeka izinyawo zakho kuyindlela enhle kakhulu yokwandisa imbongolo yakho. Ungayenza, ukuma ngokuqondile emathangeni akho. Ukukhetha isikhundla esifanelekile, thatha umlenze emuva, ubambelele imizuzwana engu-15, bese ubuyela esimweni saso sokuqala.
Ngesikhathi sokuqeqeshwa, ungenza ukuhlaselwa. Lo msebenzi kufanele wenziwe kancane kancane, ngenkathi ungasebenzisa umthwalo, kodwa ungakwenza ngaphandle kwawo.
Ukunikeza iseluleko sendlela yokwenza imbongolo ibe ngaphezulu, abanye abaqeqeshi bokuzivocavoca batusa ukuba bengeze okunye kuzo zonke izivivinyo ezingenhla. Ukulala emhlane, izandla kufanele zisekwe phezu kwesiqu. Izinduku kufanele ziphakanyiswe phezulu, ziboshwe nge-engela ye-degrees 90 emadolweni. Kancane kancane wehlisa umlenze owodwa, kufanele uzame ukuyifinyelela phansi. Kubalulekile ukuthi unyawo luhlala esimweni esiphezulu ngokuqondene nesitezi. Ukwenza umsebenzi uyanconywa uze uphele amandla.
Kufanelekile ukusho ukuthi emva kwesikhathi esithile sokuqeqeshwa okuvamile, kungase kubonakale sengathi umpristi uye waba mncane. Mhlawumbe kuyoba kanjalo. Phela, ngaphansi kwethonya lokuzikhandla ngokomzimba, amafutha angaphezu kwamandla agcwele. Noma kunjalo, akufanelekile ukukhathazeka ngalokhu nhlobo. Ukuqhubeka nokuzivocavoca, uzothola ukuthi amafutha ayanyamalala ngokuphelele, umpristi uzoba nesisindo futhi imfucumfucu ehloniphekile izoqala ukukhula.
Ukusebenza ngendlela yokwenza imbongolo ingaphezulu, kubalulekile ukunamathela eminye imithetho emndenini. Ngakho-ke, isibonelo, kungcono ukunikeza okuthandayo hhayi ama-carbohydrate elula, kodwa okuyinkimbinkimbi: aphuthumanga ngokushesha kakhulu ngamafutha futhi ngesikhathi esifanayo anika umzimba amandla amaningi.
Kumele futhi ugibele ibhayisikili, uhambe, uhlele ekuseni nokuhlwa ebusuku, gxuma ngentambo. Konke lokhu kuzosiza ukuthuthukisa ukuma kwabapristi bakho nokugcina ubuhle bayo. Ekuphetheni, ngingathanda ukukukhumbuza ukuthi uma ukwenza umzimba kukhulisa abapristi, kubaluleke kakhulu ukuba "ungawashiyi", Isongela ukugaya imisipha.
Miroslav Nemiroff: Biography nemisebenzi
Indlela Putty kahle izindonga
Jaundice kule osanda kuzalwa: Izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa